စင်္ကာပူမှာ ရေရှားမှု နှင့် မြေရှားမှုပြသာနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာ
Posted by Fros on September 19, 2014
စင်္ကာပူမှာ ရေရှားမှု နှင့် မြေရှားမှုပြသာနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာ Newater plant မှာရှင်းထားပါတယ်။ ရေကို နည်းလမ်း ၄သွယ်ဖြင့်ရရှိပါတယ်။
မလေးရှားက import water
Reservoirs ရေကန်ကြီးတွေက မိုးရေသိုလှောင်ပြီးရရှိသည့်နည်းလမ်း။
Newater ဆိုသည်မှာ လူနေ အဆောက် အဦးအားလုံးက ထွက်ရှိတဲ့ ရေဆိုးရေညစ်တွေကို မြေအောက်ဦးမင်လိုဏ်ခေါင်းကနေ စုဆောင်းပြီး
Process BOD, COD, Membrane bioreactor တွေနဲ့ Pre-treatment ပြုလုပ်ပါတယ်။ Newater master စီမံကိန်းကို ၁၉၇၀ ကျော်လောက်ကတည်းကရေးဆွဲပြီး သုတေသနပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
Sewage တွေကိုစုဆောင်းသော မြေအောက်ဦးမင်လိုဏ်ခေါင်းသည် စင်္ကာပူအရှေ့ကနေ အနောက်အထိ ရှည်လျားပြီး MRT လိုဏ်ခေါင်းအောက် ပိုနက်သောနေရာတွင် ဖောက်လုပ်ထားပါသည်။ Sewage လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာ ရေဆိုးရေညစ်များ စက်ရုံသို့ အလွယ်တကူစီးဆင်းနိုင်အောင် သဘာဝ potential အားကိုယူပြီး မျက်နှာပြင် Slope ကို အနည်းငယ်စောင်းပြီး ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ပုံတွင်ပြထားသည့် Membrane bio-reactor သည် Micro filtration 0.04 မိုက်ခရွန်အထိ အမှုန့်အညစ်အကြေးများကို စစ်ထုတ်ပေးပါသည်။ Micron အရွယ်အစားမှန်းရလွယ်ကူနိုင်ရန် လူ၏ဆံပင်လုံးပတ်သည် 100 micron အရွယ်အစားခန့်မှန်းချေရှိ၏။
MBR Micro filtration စက်ကိုပေးဖြတ်ပြီးလျှင် သူ့ ထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်သော Reverse osmosis membrane ကိုပေးဖြတ်ပါသည်။
ပုံတွင်ပြထားသည့် Reverse osmosis membrane သည့် Newater စက်ရုံမှဖြစ်ပြီး ရေစစ်အားသည် 0.0004 micron အသေးဆုံးအဆင့်ထိ စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ရေမော်လီကျူးးသာပေးဖြတ်ပါသည်။
ဘက်တီးရီးယား ၊ဗိုင်းရပ်ပိုးများ၏ အရွယ်အစားသည် 0.0004 micron ထက်ကြီးသောကြောင့် RO membrane မျက်နှာပြင်ကနေ ဖြတ်သွားလို့ မရပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ. နေရောင်ခြည်မှာပါသော UV rays ထက်အဆပေါင်းထောင်ချီပြင်းသော UV lamp မီးအိမ်ထဲသို့ ရေကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းဆေးပြီး ရှိသမျှ ပိုးတွေအားလုံးကို စိတ်ချအောင် ထပ်သတ်ပါသည်။ ပြီးမှ တနိုင်ငံလုံးရှိ သန့်ရှင်းပြီးသားရေပိုက်လိုင်းထဲသို့ ပို့လွှတ်ပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး၏ ရေအားလုံး၏ အသုံးပြုမှု ၃၀% ကို Newater မှ ထုတ်လုပ်ရရှိပါသည်။ Newater ထုတ်လုပ်မှုသည် ပင်လယ်ဆားငန်ရေမှချက်သော ကုန်ကျစရိတ်ထက် သက်သာသောကြောင့် ရေရှည်မှာ Newater ကိုပိုမိုထုတ်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။
water treatment plant Hacks August 24, 2017 at 8:49 AM
we are the manufacturers,suppliers and sellers of water treatment plants like sewage treatment plants,effluent treatment plants. we also sell and supply membrane bioreactors - ultrafiltration systems. for more information in this reagrd please visit : http://cleanwatersolutions.in
water treatment plant Hacks August 24, 2017 at 8:52 AM
we are the manufacturers,suppliers and sellers of water treatment plants like sewage treatment plants,effluent treatment plants. we also sell and supply membrane bioreactors - ultrafiltration systems. for more information in this reagrd please visit :